Ukwabelana njani ngeeNtetho ngePowerPoint Web App
Unokwabelana ngokulula nge IPowerPoint 2019 ntetho kunye nomhlobo okanye umntu osebenza naye ngokuthumela isimemo nge-imeyile. I-imeyile yesimemo iya kubandakanya ikhonkco eliya kuvula umboniso kuhlobo olusekwe kwiwebhu lwePowerPoint ebizwa ngokuba yiPowerPoint Web App. Isuka e Usetyenziso lwewebhu lwePowerPoint , umsebenzisi unokujonga umboniso. Ukuba umsebenzisi unePowerPoint efakwe kwikhompyuter yakhe, umsebenzisi unokuvula iprizenteyishini kwi-PowerPoint, ahlele umboniso, ongeze amagqabantshintshi, kwaye agcine intetho ehleliweyo kwindawo yokuqala ye-OneDrive.
Nanga amanyathelo okuthumela isimemo:
1. Gcina intetho yakho kwi-OneDrive.
2. Khetha Ifayile → Yabelana.
Ubuyiselwe kwinkcazo-ntetho kunye nepaneli yomsebenzi yokwabelana evuliwe, njengoko kubonisiwe apha. Iphepha lokwabelana naBantu liyavela, njengoko kubonisiwe. Ukusuka kweli phepha, ungenza umyalezo we-imeyile oza kuthunyelwa kubantu ongathanda ukwabelana nabo ngentetho.
3. Chwetheza idilesi enye ye-imeyile okanye ezingaphezulu kwibhokisi yokubhaliweyo yabantu.
Ukuba unedilesi engaphezulu kwesinye ye-imeyile, hlula phakathi iidilesi ngeekoma okanye iisemoloni.
Unokucofa i icon yeeNcwadi zeDilesi ngasekunene kwebhokisi yokubhaliweyo ukuze uzise incwadi yakho yedilesi. Emva koko, unokukhetha amagama kwincwadi yakho yedilesi kunokuchwetheza iidilesi ze-imeyile ngesandla.
lisinopril hctz iziphumo ebezingalindelekanga
4. Khetha imvume yokwabelana ofuna ukuyinika.
Ezi ndlela zimbini unokuzihlela kwaye unokuJonga. Sebenzisa uluhlu olwehlayo ngezantsi kwebhokisi yokuMema aBantu ukukhetha imvume.
5. Ukuba uyafuna, chwetheza umyalezo ku Faka uMyalezo [Ngokuzithandela] ngebhokisi yokubhaliweyo kwesimemo.
Umyalezo ubandakanyiwe kwi-imeyile ethunyelwa kubamkeli.
6. Cofa Yabelana.
Umyalezo wokuqinisekisa uyavela, obonisa ukuba ii-imeyile zithunyelwe.
Lo mzobo ubonisa isimemo esiqhelekileyo se-imeyile.
Isimemo sokwabelana ngePowerPoint.
Ukuvula umboniso ekwabelwana ngawo kwi-PowerPoint Web App, cofa nje ikhonkco kwisimemo. Lo mzobo ulandelayo ubonakalisa umboniso ovulwe kwi-Web App. Ungayijonga yonke le ntetho kwiWebhu yeWebhu, okanye ungavula iprizenteyishini kwiPowerPoint ngokunqakraza kwiqhosha le-Open in PowerPoint (Qaphela ukuba ukuvula ingcaciso kwi-PowerPoint, kuya kufuneka ube nekopi yePowerPoint efakwe kwikhompyuter yakho.)
Inkcazo ekwabelwana ngayo evulekileyo kwiNkqubo yeWebhu ye-PowerPoint.
Ukuba ufuna ukuthumela i-imeyile yakho ngekhonkco evumela abasebenzisi ukuba bajonge okanye bahlele umboniso wakho, unokukhetha iFayile → Yabelana → Fumana ikhonkco lokwabelana. Oku kubonisa iphepha elikuvumela ukuba wenze ikhonkco lokujonga okanye ikhonkco lokuHlela, onokukhuphela kwaye uncamathisele njengoko kufuneka.
Iziphumo ebezingalindelekanga zokuthambisa intlama kwi-fluoride
windows 10 scan kwi-pdf
indlela yokongeza umshicileli kwinethiwekhi
I-prednisone kunye neentlungu zesisu
I-topiramate ye-100 mg ithebhu